Category: featured, တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ |
မရေ oven နဲ့မကင်ဘဲဒီတိုင်းကင်ရင်ဘယ်လိုကင်ရမလဲဟင်
oven နဲ့မှ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်
Nut Minn says:
ko nyein says:
Hla Myo- New York says:
ကြက်ကောင်လုံး ကင်နည်းလေးပါ။ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=127 ဒီလင့်မှာကြည့်လိုက်ပါနော်
မဝတ်ရည်ရေ… အကြံတစ်ခုလောက် ပေးချင်လို့ပါ။ ပီကင်းဘဲကင် တွေမှာလို အရေခွံကြွပ်ရွချင်ရင် အဲဒီ ဆော့စ်ရေ ကို ပွက်ပွက်ဆူအောင်ပြုပ်၊ ပြီးရင် ဘဲပေါ် အရေတင်းလာတဲ့ထိ လောင်းချပါ။ ဘဲကို တွဲလောင်းချပြီး တညသိပ် အခြောက်ခံ၊ အရေခွံတင်ပြီး ခြောက်လာရင် နောက်နေ့ကင် လိုက်။ တကယ် ရေခွံကြွပ်ပြီး အရသာ ရှိတယ်ဗျ။ စမ်းကြည့်ပါလား… လင့်ကတော့
ွှကျေးဇူးပါ။ နောက်တခါ ဘဲကင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း ကြိုးစားကင်ကြည့်ပါ့မယ်
ဒါတောင်ဟင်းချက်ဝိုင်မပါဘူး။အ်နံ့ အရသာပြည့် စုံတယ်။အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးပါနော် ။
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. ဒီဘဲကင်နည်းက လုပ်ရလွယ်ပြီ စားလို့ကောင်းတယ်နော် 😛
အစ်မရေ တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့…. အဆင်ပြေရင် ထိုင်းစတိုင် ဘဲကင်က္ပေ့သယို လုပ်နည်းလး တင်ပေ:ပါလား… လုပ်စားကြည့်ချင်လို့… ကျေ:ဇူးပါ။
ဟုတ်၊ နောက်ပိုင်းကျရင် ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်နော် 🙂
မဝတ်ရည်ရေ…တရုတ်ဟင်းခတ်ကဘယ်မှာ ဝယ်ရမှာလဲ? City mart မှာပဲလား?
ဗိုက်ထဲက ?ကလီစာတွေကိုရော ထုတ်ရဦးမှာလား
ဟုတ်ကဲ့။ ၀တ်ရည်ကတော့ ဈေးက၀ယ်ကတည်းက ကလီစာတွေ ထည့်မချိန်ဘူး။ အလေးပိုမှာစိုးလို့.. ထုတ်ပစ်ရမှာပါ
ဟုတ်ကဲ့ City Mart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ Chinese Five Spices Powder လို့ ရေးထားတယ်
Wutyee Food House » ကင်နည်းများ says:
[…] ဟောင်ကောင် ဘဲကင် […]
ချစ်စံအိမ် 2028 says:
ချားချင်လိုက်တာ ရှလွတ် လုပ်တတ်ဝူး ချက်တတ်ဝူး မမကိုပဲ အမတော်တော့မယ် ချက်ကျွေးနော ခစ် 😀
haa.. ok I will
မနက်ဖြန် အလုပ်သမားနေ့မှာ ဟောင်ကောင် ဘဲကင် လုပ်စားကြည့်မယ်၊ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်လျက်ပါခင်ဗျာ
အစ်မ။ မီးသွေး အကင်ခုံနဲ့ ရောကင်လို့ ရလား။ ဘဲ
Kitchen Foil ပတ်ပြီးတော့လေ။
ဟုတ်ရတယ်။ မီးသွေးနဲ့ ကင်တော့ မီးသွေးနံ့လေးနဲ့မို့ ပိုတောင် စားကောင်းမှာပါ
thinn aung swe says:
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်… 🙂
ဒီဆိုဒ် ကို ခုမှပဲသိတာ….ကျေးဇူးအထုးတင်ပါတယ်..လေ့လာစရာတွေ အများကြီးပဲ နောက်အချိန်ရရင်လဲ အသစ်လေးတွေ တင်ပေးပါအုန်းနှော် အမ….ဂျပန်ဟင်းထဲက ဆိုပိုကောင်းမယ်
Thanks also.. နောက်လည်း ဟင်းလည်း လာလေ့လာပါအုန်းနော်…
တရုတ်ဟင်းခတ်မရှိလို့ ဘာနဲဆိုအဆင်ပြေမလည်း အနံ့ မွှေးအောင်
တရုတ်ဟင်းခတ်အမွှေအကြိုင်က နတ်နတ်ပွင့်၊ သစ်ဂျပို့မှုန့်၊ လေညှင်း၊ စီချွမ့် ငရုတ်ကောင်း၊ စပါးမှုန့် ဟင်းခတ်အမွှေအကြိုင်(၅)မျိုးကို ပေါင်းပြီ ထုတ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဟင်းခတ်အမွှေအကြိုင် မရှိရင် နတ်နတ်ပွင့်၊ သစ်ဂျပိုး၊ လေညှင်းတို့ ထည့်လည်း ရတယ်..
Ohm Mar says:
ဟုတ် ကင်လို့ရတယ် sis..
Tin Myat Nwe says:
200 is C or F?
၂၀၀ ဒီဂရီ C
zaw lay says:
တင်သမျှအားလုံးကြိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်ချက်နည်းအသစ်တွေလဲ တင်ပေးပါနော်
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်.. bro 😀
soe moe aung says:
so welcome bro 😀